Sida loo noqdo Aqoonta Aqoonta Aqoonta Aqoonta? - ITS Tech School
Sida loo noqdo Aqoonta Aqoonta Aqoonta Aqoonta?
Sidee loo noqonayaa cilmi-baare xogeed?
Aqoonyahan cilmi-xirfadeed oo karti-xirfadeed ah
Khabiirka Cilmiga Fanka - Cilmi-baaraha Macluumaadka
Cilmi-baaristaha : Sayniska xogtu waa maaddo isku dhafan oo isticmaala qalab badan oo khibrad leh - cabbiraadda, barnaamijyada, barashada mashiinka, macdanta xogta, iyo imtixaan - si loo xoojiyo barashada iyo xeeladaha waxtarka leh ee aqoonta loo isticmaali karo in lagu qaato doorashooyinka ganacsiga asaasiga ah. Iyada oo la helay xog qaran oo dhan, sayniska xogta ayaa kasbaday xaalad ah in ay noqoto mid ka dhexjirsan xirfadaha ugu badan ee faa'iido leh oo faa'iido u leh waxa soo socda. Tijaabinta xogta xogta maaha wax fudud oo maadama ay khasab tahay in khabiiradu ku noqdaan meelo badan oo ka mid ah awoodda ay ka mid yihiin arithmetic, injineernimada software, barashada dhabta ah, lahjadda mishiinka, baaritaanka hore, xogta, baaritaanka. Si loo gaaro noocyada kala duwan ee khibradaha kala duwan, waa aasaas u ah diyaarinta rasmiga ah ee aasaaska waxbarasho ee la rumeysan yahay oo leh habdhaqan muhiim ah iyo hantida barashada si ay u bartaan maadooyinkan.
Toddobaad 12 ama koorso 3 ah oo laga bilaabo Tiknoolijiyada Casriga ah ee Teknoolajiyada Macluumaadka waxay u badan tahay inay ugu fiicnaadeen shakhsiyaadka raba inay galaan caalamka Nidaamyada Weyn ee Big Data. Koorsadan kicistani waxay ka kooban tahay qaybo kala duwan oo 12 ah oo xoogga la saarayo mid kasta oo ka mid ah awooda ayaa hoosta ka xariiqay:
Linux iyo SQL
Barnaamijka Python iyo Scala
Hadoop YARN iyo Ambari
Sqoop, Flume iyo Kafka
Doofaar, Hive iyo Impala
R Barnaamijka ama Mabaadiida Hore
Muuqaal iyo Muuqaal Gaaban
Bilowga Waxbarashada Mashiinka
Mid kasta oo ka mid ah maaddooyinkaasi waxay tilmaamayaan Macluumaad weyn Analytics oo ah mid aan si joogta ah u kobcin oo ka shaqeeya arimaha asluubta. Koorsadani waxay bilaabmaysaa iyada oo aan laga helin caawimo dibedda ah si ay u muujiso fikradaha muhiimka ah ee ku saabsan horumarinta macluumaadka Weyn, iyagoo sii wadaya barashada waxbarashada Sayniska Warbixinta. Nidaamka Biyaha Hadoop ayaa sidoo kale si faahfaahsan ugu faahfaahsan si ay ula qabsadaan xubno ka tirsan Apache Hadoop oo loogu talagalay Falanqaynta Xogta Weyn.
Koorsadani waxaa loogu talagalay wannabes kuwaas oo iminka ku jira baaritaan ganacsi, haddana waxay u baahan yihiin jihada iyo taageerada fikradaha, tusaale ahaan, R Barnaamijka, Barashada Mashiinka, Moodhalka Muuqaalka, iyo Tirakoobka. Khabiiro khibrad leh oo u baahan in la eego awooda ay u leeyihiin diyaarinta xaqiijinta ayaa ku biiri kara koorsadan 3 todobaadkan. Cilmi-baareyaasha Xogta ee Daraasada ee koorasyadan waxay sidoo kale isku dayi doonaan inay sare u qaadaan nidaamka xeeldheer xogta iyo imtixaanka R. Koorasku wuxuu kudhifan doonaa qaybaha la socda:
Sayniska iyo Tirakoobka
R Barnaamijka iyo Mabaadiida Saadaalinta
Koorsada Shahaadada Sayniska Warshadaha ee Hindiya | Waa maxay sababta Sayniska xogta?
18 Su'aalaha Ugu Caansan ee Sayniska Cilmi-baarista Su'aalaha & Jawaabaha